Syria: Nosakanana ny Blogspot? Inona no atao manaraka? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2019 4:26 GMT
Araka ny tatitra farany avy any Syria, dia toa voalaza fa nakaton'ireo mpamatsy tolotra aterineto (MTA) Syriana rehetra ny sehatra Blogger an'ny Google, izay mampiantrano ny bilaogy malaza blogspot.com. Nakaton'i Syria imbetsaka ny fidirana ao amin'ny Blogspot. Nanomboka tamin'ny volana Febroary 2006 izany raha nitatitra ireo bilaogera monina any Damaskosy fa nakaton'ny mpamatsy tolotra aterineto (FAI) miaraka amin'ny governemanta, Syrian Telecom sy Aloola (Syrian Computer Society -SCS teo aloha) ny fidirana ao amin'ny bilaogy rehetra ampiantranoina ao amin'ny Blogspot. Tamin'ny Oktobra 2006, nitatitra ireo mpanjifa ao amin'ny MTA tsy miankina, AYA fa tsy tafiditra ao amin'ny blogspot, sehatra fibilaogina, na dia mbola azo idirana aza ao amin'ny www.blogger.com (dashboard). Tamin'ny volana Jiona 2007, nitatitra ny The Syria News Wire fa efa nesorina ny fandraràna tao amin'ny Blogspot.
Mampahatsiahy antsika indray ny fanakanana ny Blogspot tany Pakistan sy ny teknika fandinganana nampiasain'ny Päkistaney ary avy eo ireo bilaogera Indiana izany.
Tamin'ny volana Marsa 2006, namorona lohamilina proxy pkblogs.com ireo mpirahalahy Memon (Yasir Memon & Naveed Memon) mba handinganana amin'ny fandraràna ny blogspot.com. Taty aoriana tamin'ny volana Jolay 2006, raha nanomboka nanakana ny fidirana ao amin'ny Blogspot ireo MTA Indiana, dia nanangana ny Inblogs.net, izay mitovy amin'ny pkblogs.com ireo mpirahalahy Memon saingy sahaza kokoa ho an'ny fifamoivoizana Indiana.
Namorona ny fanafenan-tsotra GreaseMonkey ho an'ny FireFox ilay bilaogera Pakistaney Mansoor izay manova ho azy ny rohy blogspot ho pkblogs ary avy eo inblogs
Ankehitriny, miaraka amin'ny fanakanana ny Blogspot any Syria izay tsy mampiseho marika faharerahana, ary raha toa ka tsy mahomby noho ny antony iray na hafa ny teknika fandinganana etsy ambony, ary raha toa ka leo ianao mahita proxies sy vahaolana hialàna amin'ny fandraràna ny Blogspot, dia mety hihevitra ianao fa ilaina ny mamindra ny bilaoginao ao amin'ny Blogger.com ho any amin'ny wordpress.com.
Tsindrio ny sary raha hijery ny lahatsary
Araka ny hazavain'ity lahatsary ity, dia fomba tena tsotra ny famindrana ny blogger ho ao amin'ny wordpress.com. Na izany aza, alohan'ny hanombohana ny famindrana, dia vakio tsara azafady izay tokony atao aorian'ny dingana famindrana, tahaka ny hoe inona no atao amin'ireo sary taloha mbola ao anatin'ny Blogger.com sy ny fomba hitantanana ny resaka Search Engine Optimization (SEO), tahaka ny Google mandahatra ny votoatin'ny bilaoginao taloha.
Tokony hieritreritra hampahafantatra ny mpitsidika sy ny namanao ao amin'ny bilaoginao vaovao ihany koa ianao (ny bilaogy URL sy ny anaran'ny bilaogy). Azonao atao koa ny mitarika azy ireo ho any amin'ny bilaoginao vaovao amin'ny alàlan'ny fampidirana fanafenan-tsotra mitondra any amin'ny maodelinao blogger.com tahaka ity iray ity (soloy fotsiny amin'ity fanafenan-tsoratra ity ny kaody taloha ary aza adinoina mihitsy ny mametraka URL marina amin'ny bilaogy WordPress vaovao)